အကောင်းဆုံး VIRUS ကာကွယ် (မြန်မာ)
ဒါကတော့ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကို virus ဘယ်လို ၀င်ရောက်နိုင်တယ်။ ဘယ်လို virus တွေကို ကာကွယ်ရမယ် ဆိုတာကို ရှင်းပြထားတဲ့ စာအုပ်ကလေးပါ. ဆရာဦးအေးကို ရေးထားတာပါ. အရမ်းကိုကောင်းပါတယ်. ကွန်ပျူတာ သမားတိုင်း program တိုင်းနဲ့ မရင်းနှီးနိုင်ပေမယ့် virus တိုင်းလိုလိုနဲ့တော့ တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်းနဲ့ ပတ်သက်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်. အင်တာနက်သုံးတဲ့ သူတိုင်းကိုမှ virus မိတာ မဟုတ်ပါဘူ. အင်တာနက်မသုံးပဲ flash drive တွေ external HDD တွေ၊ တစ်ချို့ VCD (or) DVD တွေကနေ တစ်ဆင့် မှလည်း virus ၀င်နိုင်ပါတယ်. အဲ့ဒီ့အတွက်ကြောင့် ဒီစာအုပ်ကလေးကိုတော့ မဖြစ်မနေ Download လုပ်ထားဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်. အားလုံးအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော် ပင်ပန်းရကြိုးနပ်ပါတယ်.